About Us – eGanacsi
Macaamiisha isticmaasha Appkan oo ah mid bilaash ah (FREE) Waxay ka faaiidi karaan sida soo socota:
Ogow qiimaha alaab walbo oo aad u baahantahay 24/7 adigoon ku daalin dukaan wareeg. (Priced List)
Daalaco Sawirada iyo Macluumaadka kale ee aad u baahan tahay intaad wax iibsan ka hor. (Browse for all Products and Services)
Waydii qiimaha wax walba oo aad rabto inaad ogaato, kadib waxaad heleysaa jawi
4ka qabso dhaqtarka aad u baahan yahay, adigoo galinya xanuunkaga, waxaad heleysaa dhamaan dhaqaatirta ku taqasustay iyo halka aad kala xiriiri lahaydba. (Service Booking)
Adeegyada sida dhismaha, makaanikada, harqaanka, tima jaraha, qareemada, iyo wixi lamid ah ayaad ka heleysa si bilaash (FREE) ah. (Service Enquiry)
Dalbo in gurigaaga laguugu keeno cuntada, daawada, iyo wixii kale ee aad rabooto. (Free Delivery)
Dalbo Taxi, Bajaaj iyo Gaari Xamuul adigoo ku xirmaya kuwa bixiya adeegan si fudud (Transportation Service)
Intaas iyo kabadan.( Many More)
Ganacsatada iyo Adeeg Bixiyaashu waxay sidas oo kale ka fiideysan karan si bilaasha ah in ay
Ku xayisiistaad alaabtooda ama adeegooda oo dhan. (Free Ad)
Ku xirmaan macaamiishooda rabta adeega/alaabta ay hayaan.
La wadaagaan macaamiisha qiimaha, sawirka, iyo macluumaadka alaabtooda. (Priced Products with Images and Details)
U diraan fariimo ogaysiin ah macaamiisha marka ay keenaan adeeg ama alaab cusub. ( Send Notifications)
Ku xiran macmiishaada hadaa tahay adeeg bixiye sida dhaqtar, makaaniko am dawaarle. (Service Provision).
Ogow alaabta ama adeega ay hayaan kuwa kale si ad u ogaato meelaha aad ku dhaafi karto kuwa kula tartamaya, kuna soo jiido macaamiishada qiimo jaban iyo tayo.
Hel wicitaano toos ah oo macaamiishaada Kusoo wacayaan si ay u kuula sameeyan ganacsi.
Intaas iyo ka badan.
Waxaan mar walbo isku dayaynaa inaan update ku samayno app ka fadlan dajiso (download) appka mida cusub si aad uga faaiido appka
Wuxuu App ka u baahan yahay markaad isticmaalayso:
Inaad furto GPSka si Location kaaga.
Furi karo Cameradaada si sawir u qaado.
Call/Dail app kaaga
eGanacsi waa Shirkad sahlaysa in qofka ganacsadaha ahi ama adeeg bixiyaha ku xayisiiyo alaabtiisa hab online ah, wuxuu u suurta galinaa in macaamiisha helaan adeega ama alabta ama adeega ay doonayaan hab fudud.
eGanacsi wuxuu isticmaalaha (Ganacsade/Adeeg bixiye ama macmiil ka) asagoo soo dajisan karo app ka (Android and iOS) ama ka adeeganaya Webka shirkadda. Is diiwaan galin kadib, Ganacsadaha wuxuu galinayaa app ka sawirada iyo macluumaadka alaabta ama adeega uu hayo kuwaas oo ay daalacan karaan macaamiisha si ay u iibsadaan. Ganacsadaha uma baahan doono kiro dukaan qaali ah wuxuu alaabtiisa ku iibsan doonaa hab online ah asagoo helaya macaamiisha si fudud.
Marka qofka macmiilka ahi doorto adeeg ama alaab uu doonayo inuu iibsado, wuxuu helayaa macluumaadka alaabta iyo iibiyaha halka uu kala xiriiri lahaay sida goobta dukaanka iyo taleefoonka gacanta ee lagala xiriiri karo.
In ay sahal noqoto adeega oo qofka ka maarmo in waqti badan uga lumo wareeg suuq.
In ay sahal noqoto isu keenidda ganacsadaha iyo macmiilka.
In ganacsadaha ama adeeg bixiyaha la socodsiiyo adeegyada iyo alaabta cusub dhamaan macaamiisha ku xiran app ka si sahlan.
In App ka sahlo iibinta iyo gadashada alaabta iyo adeeegyada yaala suuqa.
In Macmiilka dalbado qiimo o gaasho alaab ama adeegyada inta uusan iibsan kahor.
Ogaysii Macaamisha adeegyada/alaabta cusub (Send Notification to Customers)
Ku xayisiiso alaabta iyo adeega (Market Products through online platform).
Kadhig alaabtada ama adeegaga in ay arkaan macaamiil badan (Sponsor products/services for more viewers).
Dir codsi qiimo waydiin ah (Order Request).
Dalbo Adeeg Walbo (Book for Service).
Ku xiran macmiilkaaga si toos ah (Connect with your Clients).
Soo bandhigga qiima dhimista alaabta iyo adeegga (Discounts Presentation).
Hadii aad aragto cillad ama aad hayso talo fadlan noogu soo hagaaji feedback@eganacsu.com ama naga soo wac 0615038822